Ned Xawaare: Ma Xaddidna - Farshaxanka elektaroonigga ah ayaa niyad jabay | Wararka IPhone
Ned Xawaare: Xaddid Ma Lahan - Farshaxanka Elektaroonigga ayaa markale niyad jabaya
Baahida cusub ee xawaaraha: Xaddid la’aanta ayaa ahayd mid rajo badan leh. Xaddid la'aan waxay umuuqatay inay noqon laheyd madadaalo in ciyaartan fiidiyowga ah ee loogu talagalay macruufka lagu bixiyo sawiro aan caadi aheyn, heerarka qaabeynta wixii ka baxsan mala-awaalka, laga soo bilaabo gacantii halyeeyga ee ciyaartan fiidiyowga gawaarida iyo magaca Baahida Xawaaraha. Maxaa khaldami kara, waxyaabo badan, inkasta oo ay umuuqatay wax aan la qiyaasi karin, Farshaxanka Elektarooniga ah ayaa markale sameeyay. Moodalka freemium ayaa ah mid aad loo fahmi karo soo-saare yar oo bilaabaya barnaamijka, laakiin habka Lacag-Bixinta ee Farshaxanka Elektaroonigga ah uu hirgeliyey inta badan cayaaraha laga heli karo App Store waa wax laga xumaado.
Aaway tartankii Real Real ee lacagta lagaa siiyay ee kuu ogolaaday inaad ku raaxeysato khibrada buuxda?, Inkasta oo ay run tahay in sawirada, menu-ka iyo sheekada Baahida Xawaare: Xaddid La'aan ay yihiin kuwo cajiib ah, jooji tirinta. Marka horeba, habayntu way xadidan tahay, waxaad ku dari kartaa oo keliya qaybo gaar ah, oo aad ku guuleysaneyso jinsiyadaha, jinsiyadahana waxaad u baahan tahay baatrool. Baasiiladu way xadidan tahay, sidaa darteed, waxaa lagugu martiqaadayaa inaad iibsato si aad u sii wadato ciyaarista. Midka hore ee foodda, waxay kugu casuumayaan nooc shaqsiyeyn ah "oo aan xad lahayn", laakiin tilmaamaha ay rabaan. Waxa ugu qosolka badan ayaa ah inay kuu soo bandhigayaan ciyaar ahaan "ka soo-saareyaasha Real Racing 3", marka habka wadista aysan waxba u ahayn gabi ahaanba.
Wadiddu dhab ahaan maahan jilitaan, laakiin sidoo kale ma ahan wax qaan-gaar ah. Baabuurtu waxaad moodaa inay saaran yihiin biraha, bareegyadu waa wax aan loo baahnayn oo aan jirin, iyo isbadalku waa quraafaad. Waxaan qirayaa inaan ahay taageere taxanaha Baahida Xawaaraha oo aan rajaynayay ciyaartan, Kuwaan aanan u qoondeyn wax ka badan 3 saacadood sababtoo ah waxay uraysaa Bixinta-Win-mayl maylal. Rasiidhada lacagta caddaanka ah iyo hadiyado yaryar oo ay si xiisa leh kuu siinayaan markii aad joojiso ciyaarta ayaa sidoo kale wax badan ka sheegaya ciyaarta. Marka la soo koobo, uma maleynayo inuu jiro qof kale oo aan fahmin waxa Farsamada elektarooniga ah ay damacsan tahay ciyaarteeda ugu dambeysa, gebi ahaanba arcade aan lahayn chicha, xitaa labo sano jir inuu ciyaaro (laga yaabee inay tahay dhagaystayaasheeda mustaqbalka). Nasiib darrose, ciyaarihii la bixiyay oo lagu riyaaqay ayaa si tartiib tartiib ah uga sii lumanaya App Store, in kasta oo ay jiraan labalaabyo aniga oo kale ah. Bishii Nofeembar 3, Baahida loo qabo Xawaaraha muddada dheer la sugayay ayaa timid PlayStation 4, aan aragno waxa ay hadda nagaga yaabeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Waqtiyada firaaqada » Ned Xawaare: Xaddid Ma Lahan - Farshaxanka Elektaroonigga ayaa markale niyad jabaya
Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan ayaa ah in aan soo geliyay fiidiyoow beta 9 bilood ka hor oo si cad aan u iri waxay ahayd m…. Laga soo bilaabo ea waxay ii sheegeen wax ka yar ama ka yar oo aanan dhihi karin taas, iyo inay sii wanaajin doonaan laakiin wali waa sidii hore, marka la soo koobo, waxaan dib u xaqiijinayaa wixii aan markaas sheegay.
Waa ciyaar fiican !! Haddii aan la dhihin ciyaar kale oo nuucaan ah oo siman ama ka sii wanaagsan. Tartanka dhabta ah 3? in dahab la'aan aysan macquul aheyn in la helo gawaari ama horumar? War ninyahow kaalay waa CIYAAR IYO QODOB KASTA OO AAD Tidhaahdid
Jawaab Dani Santos
Sidoo kale, nabadgelyadu waa xanuun badan tahay, waxay horey u xadeen akoonkeyga 2 jeer
jeex jeexid dijo
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay, waxay ku rakibeen ciyaarta 100%. Waan soo dajiyay (sanad kadib markii aan sugayay waxay horeyba ugu jireen App Store kale dalal kale) in yar ka dibna waan furey sababo kala duwan awgood. Jinsiyadaha in ka yar 1 daqiiqo, wadista 0 maxaa yeelay, sidaad u sheegto, waxay ku socdaan biraha ... iyo tan ugu xun, waa inaad lacag bixisaa xitaa inaad neefsato.
Taas waxaan ula jeedaa, waxaan doorbidayaa inaan bixiyo 6 euro oo ah ciyaar wanaagsan oo aan ugu huri karo waqtiga iyo dadaalka aan doonayo (wax badan ama waxyar) laakiin uguyaraan sidan nooma khiyaaneeyaan.
Weli waxaan ku xasuustaa nostalgia markii aan iibsaday asfaltigayga ugu horreeyay ee magaalooyinka IPhone 3G !!!
Jawaab si aad u dooxdo
Runta ayaa ah waan ka niyad jabsanahay ciyaarta waxaan dareemayaa ciyaar ciyaalka 5 sano jir ah, sawirada waxaa ka tagaya waxyaabo badan oo la doonayo, jinsiyadaha daqiiqad ma dhaamaan, habeyn la'aan, runta aad ayaan uga xumahay waxaan doorbidi lahaa bixi ilaa 6 doolar laakiin waxaan hubaa inuu wax badan ka faa'iideysan doono ciyaarta. Niyad jab guud.
Ciyaar weyn haddii aad tahay 1 sano jir, wadarta guud ee ciyaarta 'super arcade' Sida tartanka dhabta ah 3 midna (waa ciyaarta ugu fiican ee ujirta casriga)
Kaliya waxaan sameeyay casharrada mana aanan ciyaarin markale XD
Wax fikrad ah kama lihid. Racing-ka Real ayaa ka xun tan. Haddii tartamada ay sii dheeraadaan. Laakiin isku day inaad baabuurta ku hagaajiso dahab hahahahajajajjajajajaja wax badan baad ogtahay haddii. Eeg oo xitaa waxaan ladhacay tartan dhab ah oo lagu jabsaday qadaadiic iyo dahab aad u tiro badan WAANA SOO DHOOFAY !!!!
Kuwa dhaha NFS No Limits ma ahan wax u qalma, waxna ma ogaadaan, kulankaan wuxuu kun jeer u rogayaa RR3, sababaha fudud ee fudud ee ah inuusan hunguri u aheyn kan kale, wuxuu leeyahay firfircooni wanaagsan iyo waad ciyaari kartaa saacado badan adigoon u baahnayn inaad ku bixiso shilimaad. Habeynta iyo dhacdooyinka waa kuwo aad u wanaagsan, waxa kaliya ee aan tebi karo ayaa ah in booliska ay ka caqli badan yihiin oo ay ku qaban karaan, sida ay ku sameeyeen noocyada kale ee NFS. Ma lahaan doono sawirada ugu fiican suuqa laakiin waxay si buuxda u buuxineysaa kaalinteeda madadaalo, kuwa naga mid ah ee taageerayaasha tartanka baabuurta.
Hagaag, waan ku raacsanahay kuwa dhaha ciyaartaani waa xaaraan. Oo qofkii si kale u dhaha waa ma jecla ciyaaraha baabuurta ama mootooyinka. Waxay lahaayeen saldhig aad ufiican xagga ciyaarta iyo ciyaarta sida NFS loogu doondoon badnaa. Sida loo yaqaan 'RR3', sidoo kale waa wax weyn laakiin waxa xun waa sugitaanka lagu ciyaari karo, markaad dayactirto. Waxaan u maleynayaa in haddii qiimaha uusan ka badneyn € 6,99 ama taasi aysan aheyn qarash aad u weyn laakiin sidoo kale waa run in marka laga hadlayo NFS No Limits ay noqoneyso lacag lumis.
Runtu waxay tahay inaan ka xumahay inaan sugo inta gaaska la buuxinayo si aan u sii wato ciyaarista (ama tigidhada tartamada) laakiin ciyaarta ayaa ah mid madadaalo badan. Waxay leedahay noocyo qaab ah: qarsoodi, taxane, tartanno, tartamo gaar ah, waxqabadka iyo wax ka beddelka jirka, inkasta oo kan dambe uu aad u liito. Ku ciyaarista qaab qarsoodi ah iyo taxane baabuur waxaad helaysaa dahab, lacag, qaybo iyo fureyaal, taasi waa, haddii aad ciyaarto wax badan waxaad helaysaa qayb ama baabuur. Way iska cadahay in qofkasta oo bixiyaa uu sifiican oo dhaqso leh u qaban doono, laakiin waa arin madadaalo leh. Anigu ma aan bixin ama ma bixin doono dinaar, welina waxaan haystaa baashaal badan. Kawaran hadday tahay inay hagaajiyaan (mar kale ayaan iri) waa arrinta baatroolka, markaan ciyaarayo waxaa ii haray hammi ah inaan sii wado laakiin baatroolku ma istaago.
Waxaan taleefanka gacanta u gudbiyay wiilkayga 5 jirka ah ee ila ciyaaray "Qaawan", "Inta badan la doonayo" iyo "isbadal" .Kadib markii aan inbadan ciyaaray, waan wadi karayay gaadhiga. Waxaan u dhaafay ciyaartan si aan u arko sida uu ugu guulaystay tartankii ugu horreeyay ee uu orday ... Waxaan u ciyaaray dhowr jeer si aan u arko habeynta iyo waxa ay kuugu soo bandhigeen oo bilaash ah oo aan ahayn lacag bixin waana tirtiray ... Ceeb maadaama loo sameeyay in lumiyo mid ka mid ah sagasyadii wanaagsanaa ee tartammada tartanka ... Weli waxaan haystaa kuwa loogu doondoonista badan yahay iphone 6 ...
Weerar phishing cusub ayaa isku dayaya inuu ka xado ID-yada Apple-ka dadka isticmaala
FIFA 16, ama sida loo burburiyo sheeko qurux badan